Oromo News 03.22.2021 | KWIT
Nebraskan April dhuma irrati yookin jalqaba May irrati talaali corona virus ummataa dhiyeesudhaf akkuma karoorfatanitti jiru, garuu Governor Pete Ricketts akka jedheti sababiin baayen murti murtaahe diigu nidanda’a jedhee jira.
Nebraska ammati kan xiyyeefate talaali kennuufi jirtu nama umriin isaani 50 – 64 jiruu fi nama dhukkuba bira qabuu akka kennitu himte.
South Dakota keessati talaali corona virus namni dabalata kuma kudhan ta’an dabalataan akka fudhachuu danda’an himan. Deparmantiin mana fayyaa Kan State garee dursaa biraatif talaali baneefi jira. Kunis kan uf keesa qabatuu firefighters, nyaata, agriculture, fi hojattoota transportation dha. Ammati, 37% South Dakota keessati talaali tokko fudhatanii jiran, jiraattoni baaye taalali fudhachu akkak hin feene himan.
Halkan kana, board mana barumsa Sioux City fandii Covid-19 kan biraa irrati mari’atani jiru. Guyyaa jimaata, Iowa Deparmantiin kan barumsa kan state akka gabaasseti sababa dhukubu kana maneen barumsa federal relief million $775 akka gadi dhifameefi jiru himan.
Member board mana barumsaa tokko akka jedhe Siouxland Public Media himetti, aanan mana barumsaa aid million 43 kan argatu yoo tau waliigalatti kan argatu million $63 dha.